Jijiga: Ha ka qadin qaan baxa Atoobiya …qaado axankaaga – Rasaasa News
3 News in Somali
Jijiga: Ha ka qadin qaan baxa Atoobiya …qaado axankaaga
Waxaa lagu wargalinayaa dhamaan qurba joogta u dhalatay degaanka Somalida Atoobiya (Ogaden) in ay u deg degaan qaadashada qaan baxa Atoobiya ay u celinayso qurba joogta ku qanacsan qaadashada dhulka Soomaaliyeed.
Hadaad ogtahay iyo hadaadan ogaynba waxaa mudo labo sano ah ka socda degaanka Somalida Atoobiya bixinta miisaaniyada xoog leh oo ay Atoobiya ugu talo gashay qaansheegatada Somalida Ogadeeniya. Miisaaniyaadaas oo lagu bixinayo dhawr hab oo kala ah; siin jago aad dhisatid, martigaliyo wanaagsan, lacago qayilaad iyo kharjka dalxiis (kharajka Diyaarada, kharajka jiifka, kharajka cuntada iyo kharajka raaxada maalgubida).
Helitaanka qaanbaxaas waxaa kaa xiga oo kaliya in aad la hadasho madaxda degaanka Somalida Atoobiya. Waxaa kale oo aad ku xoojin kartaa qaadashada qaan bax Atoobiya sheegashada in aad ahaan jirtay taageere buuxa ama xubin ka tirsanaan jiray gobonimo doonka Jwxo.
Kumanaan ruux oo ka soo jeeda degaanka Soomaalida Atoobiya ayaa arinkan hore uga faa,iidaystay, walina way socotaa.
Hadaba si,aad uga faa,iidaysato, uguna guulaysato qaadashada qaan baxa, waxaa waajib ah in aad la xidhiidho la samayso madaxda dawlada degaanka Soomaalida, kana dhigato saaxiib ka hor inta aadan qaadan go,aanka dhoofka.
Digniin: hadii aad halmaanto in aad xidhiidh la samayso madaxda, oo aad iska tagto degaanka ogow waad ku dhacday in aad hesho lacagta qaan baxa Atoobiya. Hadaad hesho qaraabo wax saaba saabaysa iyana waa suurto gal helida qaan baxa.
Kumanaanka ka mid ah qurba joogta ku qulqulay degaanka Soomaalida Atoobiya ayaa qorshaoodu yahay qaadasho jago iyo habeen dhax, dhamaantoodana way heleen.
Qaanbaxa Atoobiya qaybtaada doono iyo qayb kale.
Jijiga: Dawlada Degaanka Somalida oo xujada Xoolo dhoofinta siisay shirkada Indha-deero
Jijiga:Madaxwaynaha Degaanka Somalida Atobiya oo ku Wajahan Wadamada Yurub